About Us – MYANHOUSE
Myanhouse Local Made အား (၂၀၁၅) ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့၍ ရန်ကုန်မြို့၏အထင်ကရ အဆောက်အဦ တစ်ခုဖြစ်သော လောကနတ်အဆောက်အဦတွင် တည်ရှိပါသည်။ မြန်မာ့ရိုးရာ လက်မှုနှင့် မြန်မာ့ထုတ်ကုန်များမှတစ်ဆင့် မြန်မာတို့၏ သမိုင်းကြောင်းနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအဆင့်အတန်းကို ပြည်ပနိုင်ငံများသာမက ပြည်တွင်းနေထိုင်သူများပါ သိရှိစေရန်၊ အလေးထားစေရန် နှင့် မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု အစဉ်အလာ ပိုမိုထွန်းကားလာစေရန် အစရှိသည့် ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် တည်ထောင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
Myanhouse တွင် မြန်မာနိုင်ငံဒေသအနှံ့အပြားမှ ရိုးရာလက်မှုပစ္စည်းများ၊ သဘာဝဆိုးဆေးထည်များ၊ ရိုးရာချည်ရက်ကန်းထည်များ၊ ကြာရက်ကန်းထည်များ၊ ပယင်း၊ ကျောက်စိမ်းနှင့် အခြားတွင်းထွက် ကျောက်များနှင့် ပြုလုပ်ထားသည့် ရွှေငွေလက်ဝတ်ရတနာများ အပါအ၀င်အခြားသော လက်မှုပစ္စည်း နှင့် အမှတ်တရ ပစ္စည်းများအား အရည်အသွေးကောင်းမွန်မှုကို အလေးပေး၍ ရောင်းချလျှက်ရှိပါသည်။
Myanhouse မှ ရိုးရာ လက်မှုပစ္စည်းများနှင့် ပြည်တွင်းထွက်ကုန်များကို လက်လီလက်ကား ရောင်းချသည့်အပြင် Online မှ မှာယူမှုများကိုလည်း ရန်ကုန်မြို့တွင်း အိမ်တိုင်ရာရောက်စနစ် နှင့် မြို့များသို့ ကားဂိတ်ထိအရောက်ပို့စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးလျှက် ရှိပါသည်။
Myanhouse မှ ၀ယ်ယူအားပေးသူများလက်ထဲသို့ စစ်မှန်၍ အရည်အသွေးကောင်းမွန်သည့် ပစ္စည်းများကို နွေးထွေးလှိုက်လှဲသည့် ၀န်ဆောင်မှုအပြည့်အ၀ဖြင့် ပို့ဆောင်ပေးလျှက်ရှိပါသည်။
Myanhouse Local Made ဆိုင်ခွဲသစ်အား ရန်ကုန်မြို့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဈေးကြီးတွင် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဧပရယ်လ (၅) ရက်နေ့မှ စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။
Myanhouse Local Made was founded in 2015 and located at one of the outstanding colonial buildings of Yangon which is also known as Lokanat building. As it was founded, there were exact visions to promote the standard of historical and cultural value locally and internationally and to encourage the wider production of quality traditional crafts.
We sell high quality crafts from the places all over the country, natural dyed fabrics, traditional woven fabrics, lotus fabrics, shawls and scarves, amber, jade, gemstones, jewelry and other souvenirs of Myanmar.
Both retail and wholesale services are available at our shop and there is delivery service as well.
We care of quality and our first priority is customer service.
New branch of MYANHOUSE Local Made has started at Bogyoke Market on the fifth of April, 2019.